Nezvedu - Chengdu Zhihongda Nonwoven Bag Co., Ltd.
Chengdu zhihongda nonwoven bhegi Co, Ltd. yakavambwa muna 2013, iri muChengdu, maodzanyemba akadziva kumadokero kweChina, inonyanya kuita mabhegi asina kurukwa, donje bhegi, mabhegi evasvas, mabhegi epolyester, bhegi rakapetwa, bhegi rakamoneredzwa, bhegi rekuturika, mabhegi anotonhorera, homwe mabhegi, zvimwe zvisina kurukwa zvigadzirwa uye eco kurongedza chigadzirwa. Iyo yekugadzira bhizinesi inosanganisa dhizaini, R&D, mabhegi kugadzirwa uye sevhisi, uye ichipa yakasanganiswa Eco bhegi mhinduro.
Tine makore anopfuura gumi ehunyanzvi ruzivo muEco-mabhegi kugadzirwa. Isu tinopa Eco-mabhegi kumisika yemuno uye kutumira kunze kumisika yemhiri kwemakungwa, seEurope, America, Canada, Australia, Japan, Singapore, nezvimwewo, Tiri timu yehunyanzvi yemirairo yako yeOEM ODM. Kune maOEM madhaira, tinogona kubatsira kuita ese mashandiro ekugadzira, kubva pane pfungwa kusvika kune yekupedzisira chigadzirwa, mushe; yemirairo yeODMM, kune zvakawanda zvaunogona kusarudza.
Mabhegi edu ane hushamwari uye anogara kwenguva refu, inzvimbo yakanaka yekushambadzira mumugwagwa. Yakasarudzika dhizaini bhegi inounza iwe isingagumi mabhenefiti kubva mukusimudzira uye brand kuisirwa, inogara ichisimbisa yako brand’s kana uchishandisa. Yedu kambani inoshingirira kushandisa zvakatipoteredza nzira dzekudhinda uye dzakadzokororwa & dzakasimba micheka yemabhegi edu.
CHENGDU ZHIHONGDA ndiye achave TOP MUMWE muecko-mabhegi indasitiri. Chinangwa chedu ndechekupa zvirinani mabhegi emhando ine mutengo unonzwisisika wevatengi vakasiyana pasirese. basa redu nderekubatsira vatengi vedu kuti vagadzire yakanaka mhando yechiratidzo uye kuchengetedza nharaunda. Tinoda kugamuchira zvinodiwa nevatengi vedu zvakasiyana siyana uye mazano, kuti tirambe tichigadzira mabhegi matsva eecko kune vatengi vedu. Isu tinopa masevhisi ehunyanzvi kune vatengi vedu kuchengetedza yavo yakakosha nguva uye mutengo.
Chengdu zhihongda ane akakwana eco mabhegi kugadzira michina, anga achitsvaga akangwara otomatiki ekugadzira modhi uye mamwe akasarudzika emawoko kusona. Iyo yakafambiswa mapfumbamwe emavara gravure yekudhinda muchina, laminating muchina, ese marudzi emuchina wekusona, anenge 106 silika skrini yekudhinda vashandi uye vanosona vashandi.
Yedu yekutengesa timu inonyatsoziva yeedu vatengi 'zvakasarudzika zvigadziriso zvinodiwa, senge eco bhegi saizi, logo & pateni kudhinda, machira kusarudzwa, Maitiro kusarudzwa, zvichingodaro. Tinoshanda nevatengi vedu kuti tiite zvatinogona. Nguva yekuendesa yakakosha kwatiri, nekuti hatigone kupotsa vatengi vedu 'vachishandisa mazuva. Kana zvikaitika mukurumidzira mukugadzirwa, isu tichaudzawo mutengi nenguva.
Mamwe makore apfuura, vatengesi kupota pasirese vaishandiswa kupa mapurasitiki emahara kune vatengi. Rudzi urwu rwekushandisa kuraswa kwepurasitiki bhegi rakaoma kudzikiswa kwemakore zana uye rinotsanangurwa se "chena kusvibiswa". Mukuda kwechisiko uye mabhegi echikwama, isu takasimbisa kambani "Zhihongda" yekupa mabhegi eecko-anoshamisika kumusika.
Kambani yedu zita "Zhihongda" iri kutarisira kuti tinogona kubatana kuvaka yakanaka nharaunda, kuti tiite yedu kambani basa.
Kurarama kwedu kwemazuva ese kunogadzira kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Ibasa redu kudzora kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Mukugadzira nekuunza zvigadzirwa zvitsva, isu tinogara tichiteerera kune inoenderana nenyaya. Mumakore apfuura, isu takatarisana nematambudziko mazhinji uye tinotenda rutsigiro kubva kune vatengi vedu.
Zvinoreva Eco Bhegi
Mabhegi eEco-ane hushamwari akagadzirwa uye anogadzirwa kuti ashandise zvakare, Deredza uye Dzokorodza.
Nonwoven Bag: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kushandiswazve kanodarika zana.
Cotton Bhegi: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kushandiswa kanopfuura ka200.
Canvas Bag: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kushandiswazve kanopfuura mazana mana.
Linen Bhegi: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kushandiswa kanodarika ka500.
Nylon Inopetwa Bhegi: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kuva kanopfuura mazana matatu.
Yakakura Nylon Bhegi: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kushandiswa kanodarika ka500
Laminated Nonwoven Bhegi: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kushandiswa kanopfuura ka200.
Laminated rakarukwa Bag: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kushandiswazve kanodarika mazana matatu.
Yakapetwa Pepa Bhegi: kazhinji, bhegi rimwe rinogona kushandiswazve kanodarika makumi matatu.
Cotton Canvas Bag: 100% zvakasikwa zvinhu, inogona kuve yekupedzisira biodegradation mushure mekurasa.
Linen Bhegi: 100% zvakasikwa zvinhu, inogona kuve yekupedzisira biodegradation mushure mekurasa.
Kraft Pepa Bhegi: 100% zvakasikwa zvinhu, inogona kuve yekupedzisira biodegradation mushure mekurasa.
Nonwoven Bag: Isina chepfu uye isina munhuwi PP zvinhu, ichave yakashatiswa ingangoita mwedzi mitatu mushure mekurasa, inotanga kudzikisira uye inova hupfu uye inosangana mumasikirwo mushure memwedzi gumi nemaviri.
Laminated Bhegi: Iyo haina-chepfu uye isina hwema PP zvinhu, ichave yakadzikiswa ingangoita mwedzi mishanu mushure mekurasa, inotanga kudzikisira uye inova hupfu uye inosangana mumasikirwo mushure memwedzi gumi nemisere.
Isina-rakarukwa Bhegi: 10% -30% yezvigadzirwa zvinobva pazvinhu zvakashandiswazve zvePK zvigadzirwa. Iyo ichiri inogona kudzokororwazve kana ikabatwa nemazvo.
Mabhegi Akarukwa: 20% -50% yezvigadzirwa zvinobva pazvinhu zvakashandiswazve zvePK zvigadzirwa. Iyo ichiri inogona kudzokororwazve kana ikabatwa nemazvo.
PET Mabhegi: 80% -100% yezvigadzirwa zvinobva mumabhodhoro epurasitiki akashandiswazve. Iyo ichiri inogona kudzokororwazve kana ikabatwa nemazvo.
YEMAHARA SAMPLE IN STOCK! Tinotarisira kugamuchira zvako zvakatarwa zvinodiwa, masampuli uye mapatani emapatani. Ndokumbira kuti ubate timu yedu yehunyanzvi ipapo!